အရှင်ပညာဝံသ: March 2011
Posted by Pannavamsa / 7:57 PM / Comments: (0)
၀ိသိဋ္ဌ ဥဘတောဝိဘင်္ဂဓရဘွဲ့၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယဘွဲ့၊ သာမဏေကျော်ဘွဲ့၊ ၀ိနယ၀ိဒူဘွဲ့၊ ၀ိသိဋ္ဌအင်္ဂုတ္တရ၀ိဒူဘွဲ့များရ အရှင်ပညာဓဇာလင်္ကာရ အား ရေးစပ်ပူဇော်သည့် ရှစ်ဆယ်ပေါ်တေးထပ်
· ပိဋကတ်တော် စာသဘင်ပွဲ
· ဆင်ကာနွှဲဖို့ နေ့ညစဉ်
· ရည်သန်ဇွဲ မြတ်အရှင်မှာ
· အောင်ပွဲဝင် ဂုဏ်ရည်နှင်း
· ဓမ္မိကာရုံတိုက် တပည့်လိမ္မာ
· အသိပညာ ထွန်းတောက်လာခြင်း။
v ခက်ခဲလှ အဆင့်မြင့်ပညာ
v ဖူးပွင့်ဝေဆာ အရှင်သား
v ထူးတင့်ဂုဏ်ဖြာ ပြိုင်ယှဉ်ရှားပါလုိ့
v ဇာနည်တစ်ပါး အောင်ပွဲဆင်
v ၀ိနည်းဒေသနာ အာဂုံကျက်
v ဥာဏ်စွမ်းထက်သည့် အာဂ … အရှင်……….
Ø ၀ိသိဋ္ဌနှင့် ဂုဏ်ထူးဝင်
Ø ကွမ်းခြံတစ်ခွင် ကျော်ကြား
Ø ပရိယတ်နယ်တွင် ခန့်ငြားပါလို့
Ø ထင်ရှားမည့် ဘွဲ့များပိုင် … ရှင်…….
Ø အရှင်ပညာဓဇာလင်္ကာရ ဂုဏပူဇာ
Ø ကျောင်းတိုက်သာသနာ မော်ကွန်းတင်ဖို့လေး ……..
Ø ဥဘတောဝိဘင်္ဂဓရ အရှင့်ပညာ
Ø နေလပမာ ထွန်းပနိုင်ဖို့လေး……
မွေးနေ့ပွဲနှင့် ထမနဲ (သို့မဟုတ်) စာအောင်သံဃာပူဇော်ပွဲ
Posted by Pannavamsa / 8:07 PM / Comments: (0)
မွေးနေ့ပွဲကို လူမျိုးအသီးသီး၊ ဘာသာဝင်အသီးသီး ပြုလုပ်ကျင်းပလေ့ရှိကြ၏။ သို့သော် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ တရားအလိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှုအလိုက်၊ အရပ်ဒေသအလိုက်၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအလိုက် ကွဲပြားခြားနားမှုကား ရှိတတ်စမြဲဖြစ်၏။ မည်သို့ပင်ရှိကြစေကာမူ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခြင်းသည် ကာယကံရှင်နှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်မှာ အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်၏။ မွေးနေ့ရှင်က မွန်မွန်မြတ်မြတ် ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်းပြုသကဲ့သို့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးများကလည်း အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ၀မ်းပန်းတသာ ပေးလေ့ရှိကြ၏။ ဆုတောင်းမေတ္တာများလည်း ပို့သပေးကြ၏။ တစ်ဦးက စေတနာ၊ တစ်ဦးကမေတ္တာဟု ဆိုရမည်ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် များသောအားဖြင့် မွေးနေ့ကုသိုလ် လုပ်တိုင်း ရဟန်းသံဃာတော်များကို ပင့်ဖိတ်၍သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြသည့် ကျောင်းတိုက်များသို့ သွားရောက်၍သော်လည်းကောင်း၊ ဘုရားစေတီပုထိုးများသို့ သွားရောက်၍သော် လည်းကောင်း အလှူဒါနများ ပြုလုပ်ကြ၏။ သီလဆောက်တည်မှုများလည်း ပြုလုပ်ကြ၏။ မေတ္တာဘာဝနာ စသည့် တရားဘာဝနာများလည်း ပွားများအားထုတ်လေ့ရှိကြ၏။ အတုယူသင့်၊ လိုက်နာသင့်သော အပြုအမူဟု ဆိုရမည်လည်း ဖြစ်၏။
လူအများမွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိကြသကဲ့သို့ ရဟန်းသံဃာတော်များလည်း မွေးနေ့ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ ရှိကြ၏။ ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ မွေးနေ့ပွဲသည်လည်း လူအများ၏ မွေးနေ့ပွဲကဲ့သို့ပင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကို ဖြစ်စေခဲ့ပါ၏။ အကြောင်းမှာ ဘုရားအမှူးရှိသော ပင့်သံဃာတော်များအား ဆွမ်းခဲဖွယ်ဘောဇဉ်တို့ဖြင့် ဆက်ကပ်လုပ်ကျွေး လှူဒါန်းပူဇော်ခွင့်ကို ရကြသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ထို့ပြင် ကြွရောက်တော်မူလာကြသည့် ဆရာတော်ကြီးများထံမှ မွေးနေ့ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် တရားဓမ္မများကို နာကြားကြရခြင်းဟူသော ဓမ္မဿဝန ကုသိုလ်အခွင့်ရေးကို အထူးတလည် ရလိုက်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်၏။ ဤကဲ့သို့သော ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ မွေးနေ့ပွဲ အတော်တော်များကို တွေ့ကြုံခဲ့ဖူး၏။ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မှုနှင့်အတူ ဓမ္မဿဝန ကုသိုလ်မင်္ဂလာအထူး ကိုလည်း ရရှိခဲ့ဖူးပါ၏။ တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသည့် မွေးနေ့ကုသိုလ်များအနက် ယခုတင်ပြလိုသည့် မွေးနေ့ကုသိုလ်ပွဲမှာ လေးစားကြည်ညိုခဲ့ရပါသော ဆရာမြတ်၏ မွေးနေ့ကုသိုလ်ပင် ဖြစ်၏။
ဆရာမြတ်၏ မွေးနေ့ပွဲကို နှစ်စဉ် တပို့တွဲလပြည့်နေ့တွင် ကျင်းပလေ့ရှိ၏။ ဤမွေးနေ့ပွဲသည် စည်ကားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ပွဲလည်းဖြစ်၏။ ဤမွေးနေ့ရှင် ဆရာမြတ်သည်ကား ဓမ္မိကာရုံကျောင်းတိုက် ကို ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တ၀ိသုဒ္ဓ မထေရ်မြတ်ပင် ဖြစ်၏။ ဆရာတော်သည် နှစ်စဉ် တပို့တွဲလပြည့်နေ့ရောက်တိုင်း ထမနဲထိုးကာ မွေးနေ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆရာတော် သံဃာတော်များ၊ ဧည့်ပရိသတ်များအား လှူဒါန်းဧည့်ခံကျွေးမွေးလေ့ရှိ၏။ ဆရာတော်၏ မွေးနေ့ပွဲသည် အခြားအခြားမွေးနေ့ပွဲတို့နှင့် မတူဘဲ၊ တစ်မူထူးခြားစွာ ထမနဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသောကြောင့် မေ့ပျောက်ရန်ခဲယဉ်းလှ၏ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်၏။ နှစ်စဉ် တပို့တွဲလ ဆောင်းလရာသီနှင့်အညီ ကျွေးမွေးဧည့်ခံသည့် မွေးနေ့ပွဲဟုလည်း တင်စားကာ ခေါ်ဆိုသင့်၏။ တပို့တွဲလတွင် ထမနဲပွဲရှိသည်ဟု ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀က ကျောင်းသင်ခန်းစာတွင် သင်ယူခဲ့ကြရ၊ ဖတ်ခဲ့ကြရ၏။ သို့သော်လည်း ထမနဲထိုးပွဲကို ငယ်စဉ်က တစ်ခါမျှမမြင်ဖူး ခဲ့သကဲ့သို ထမနဲဆိုသည်မှာ အဘယ်ကဲ့သို့ အရာမျိုးဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုလည်း မသိရှိခဲ့ဖူးပါ။ အကြောင်းမှာ အောက်ပြည်အောက်ရွာများတွင် ထမနဲထိုးသည့် ဓလေ့ထုံးစံမရှိသလောက်ပင် ရှားပါးလှသောကြောင့် မမြင်းဖူးခြင်း၊ မသိရှိကြခြင်းဖြစ်၏။ ဤမြို့တွင်လည်း ဆရာတော်၏ ကျောင်းတိုက်မှာပင် ထမနဲထိုးသည့် အလေ့အထ ရှိသည်ဟုသာ ထင်မြင်မိ၏။ ဆရာတော်သည် မေတ္တာဓာတ်ကြီးမားသူ၊ သည်းခံရောင့်ရဲတတ်သူ လည်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း ဆရာတော်ကို တပည့်များ၊ မိတ်ဆွေများ၊ ဒကာ၊ ဒကာမများက ချစ်ကြောက် ရိုသေ ကြည်ညိုကြ၏။ လေးစားမြတ်နိုးကြ၏။ ဆရာတော်၏ မွေးနေ့ပွဲကိုလည်း တပည့်များ၊ ဒကာ၊ ဒကာမများ နှစ်စဉ်လာရောက်အားပေးကြ၏။
ယခုအခါ ဆရာတောကြီးလွန်တော်မူခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအထိ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်၏။ သို့သော်လည်း ဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်က ကျင်းပခဲ့သည့် မွေးနေ့ပူဇော်ပွဲကိုကား လက်ရှိဆရာတော်နှင့် တပည့်များ၊ ဒကာ၊ ဒကာမများက စိတ်အားထက်သန်စွာ ကျင်းပပူဇော်လျက်ရှိကြ၏။ တပို့တွဲလပြည့်နေ့ရောက်တိုင်း ဆရာတော်ကြီး၏ မွေးနေ့ကို ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ဆရာတော်ကြီးအတွက် လွမ်းဆွတ်သတိရသည့်အနေဖြင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုလည်း နှစ်စဉ်ပေးဝေလျှက်ရှိ၏။ ဆရာတော်ကြီး ကောင်းမြတ်သောသုဂတိဘုံဌာနသို့ တက်လှမ်းနိုင်ပါစေဟူသော သမ္မာဆန္ဒများလည်း အသီးသီးထားရှိကြကာ ပေးဝေကြခြင်းလည်း ဖြစ်၏။
ဤးမွေးနေ့ မွေးရက်သို့ရောက်တိုင်း မွေးနေ့ပွဲနှင့်အတူ စာအောင်သံဃာပူဇော်ပွဲကိုလည်း ပူးတွဲကျင်းပပေးလျှက် ရှိ၏။ စာအောင်သံဃာပူဇော်ပွဲမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသော ပါဠိပထမပြန် စာမေးပွဲတွင် ဤကျောင်းတိုက်မှ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သော စာသင်းသား ရဟန်း၊ သာမဏေများကို ကျောင်းဒကာ၊ ကျောင်းဒကာမများမှ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ ချီးမြှောက်ပူဇော်သည့်ပွဲဖြစ်၏။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဤကျောင်းတိုက်တွင် လာရောက်ပညာသင်ယူနေကြသော စာသင်သားများအား စာသင်တိုက်တည်ထောင် သည်မှစ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေမြဲ၊ လှူဒါန်းနေဆဲလည်းဖြစ်၏။ စာအောင်သံဃာပူဇော်ပွဲကိုပါ ပူးတွဲကျင်းပသည့် မွေးနေ့ပွဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပင့်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့် ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ စာသင်သား သံဃာတော်များအား အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်း၊ အချိုပွဲများဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းမှုကိုလည်း ဆောင်ရွက်ကြရ၏။ နှစ်စဉ် ဤနေ့ ဤရက်ရောက်တိုင်း အရုဏ်ဆွမ်းအလှူရှင်၊ နေ့ဆွမ်းအလှူရှင်နှင့် အချိုပွဲအလှူရှင်များ အသီးသီးရှိနေကြပြီးဖြစ်၏။ ဆရာတော်၏ ဘုန်းကံ၊ သံဃာတော်များ၏ ဘုန်းကံကြောင့် ဒကာ၊ ဒကာမများ သဒ္ဓါတရားထက်သန်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ကြခြင်းဖြစ်နိုင်၏။ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းလှသည့် အလှူပွဲဖြစ်ပါ၏။ သာဓုနုမော် အကြိမ်ကြိမ်လည်း ခေါ်ဆိုထိုက်ပါ၏။ ပရိယတ္တိသာသနာတော်ကို ချီးမြှောက်သည့်ပွဲ၊ ပရိယတ္တိသာသနာ့ ရေသောက်မြစ် ရှင်သန်ထွားကြိုင်းပြီး ပဋိပတ္တိ သာသနာအခက်အလက်များ ဝေဆာလာအောင် ရေသွန်းလောင်းပေးသည့်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါ၏။
ဆရာတော်၏ သင်ကြားပြသမှု၊ ကျောင်းဒကာ၊ ကျောင်းဒကာမများ၏ လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှုများကြောင့် တပည့်ပေါင်းများစွာကို ဤစာသင်တိုက်မှပင် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့၏။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်တွင်လည်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်များ၊ စာချဆရာတော်များ၊ ကမ္မဌာန်းနည်းဆရာတော်များ စသည်ဖြင့် အသီးသီးပေါ်ထွန်းနေခဲ့သည်ကိုလည်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သိရှိနေကြရ၏။ ဆက်လက်၍လည်း ဤပရိယတ္တိစာသင်တိုက် တည်ရှိနေသမျှ၊ ကျောင်းဒကာ၊ ကျောင်းဒကာမများ လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှုရှိနေသမျှ ဆရာတော်၏ တပည့်မျိုးဆက်သစ်များ အစဉ်အမြဲ အသီးသီး ပေါ်ထွန်းလျှက် ရှိနေမည်မှာလည်း မလွဲဧကန် အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ ဤကဲ့သို့ မျိုးဆက်သစ်များ အစဉ်အမြဲပေါ်ထွန်းနေခြင်းသည် အနာဂတ်သာသနာတော်အတွက် အားတက်စရာပင်ဖြစ်၏။ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး သာသနာ့တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်သွားကြမည်ဟု လည်း ယုံကြည်မိပါ၏။ သို့မှသာ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမတရားတော်များ ဆက်လက်ပြန့်ပွားနိုင်မည်ဖြစ်၏။ အနာဂတ်ရဲ့ သာသနာ စာသင်ငယ်တို့ လက်ထဲမှာဆိုသည့်အတိုင်း အနာဂတ်သာသနာတော် အစဉ်တည်တံ့ပြန့်ပွားရန်မှာ စာသင်ပျိုနု သောတုဇနတို့၏ ထက်မြက်သည့် ဥာဏ်ပညာ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု လုံ့လ၀ီရိယတို့ အပေါ်တွင် များစွာတည်မှီနေသည်ဟု ထင်မြင်မိ၏။ အမြှော်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံရန်လည်း အထူးပင်လိုအပ်လျက်ရှိ၏။ တတ်မြောက်ထားသည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများကိုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာရင်သွေးငယ်များအား ဘာသာရေးအသိအမြင်များ နိုးကြားလာအောင် တစ်ဆင့်ဖြန့်ဖြူးဝေငှ ပေးရမည်လည်းဖြစ်၏။ ထို့ပြင် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည်တို့ကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှနေ၍ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုပြုသင့်၏။ ဤသို့ပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အား ကြီးပွားတိုးတက် ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ရာလည်း ရောက်သကဲ့သို့ အသိပညာ အတတ်ပညာများကို သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည့် ဆရာအရှင်တို့၏ ကျေးဇူး၊ ထောက်ပံ့လှူဒါန်း ပူဇော်မှုကို ပြုခဲ့ကြ၊ ပြုနေကြဆဲ၊ အစဉ်အမြဲလည်း ပြုနေကြမည့် ဒကာ၊ ဒကာမများ၏ ကျေးဇူးတို့ကို ကျေပွန်စွာ ပေးဆပ်ရာလည်းရောက်၏။
စာသင်သား သောတုဇနတို့သည် အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ကို ချစ်မြတ်နိုးသော စိတ်ဓာတ်များ နိုးကြားထက်သန် နေသင့်၏။ ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုသည့်အတိုင်း တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ အကြီးအကဲဖြစ်လာပါက အကြီးအကဲနှင့် ထိုက်သန်သည့် အရည်အချင်းရှိနေရမည့်၊ ရှိနေသင့်သည့်အချက်ကိုလည်း အထူးသတိပြုသင့်၏။ အရည်အချင်းရှိမှလည်း အများ အကျိုး၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးတို့ကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နိုင်မည်၊ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်၏။ တိုးတက်ကြီးပွား အောင်မြင်နေကြသည့် သာသနာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ကြည့်လျှင် ဤအချက်ကို ကောင်းစွာတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မွေးနေ့ပွဲနှင့် ထမနဲ (သို့မဟုတ်) စာအောင် သံဃာပူဇော်ပွဲမှသည် အသိအမြင်များတိုးပွားလာပြီး အတ္တဟိတ၊ ပရဟိတ အကျိုးတို့ကို သယ်ပိုးရွက်ဆောင်နိုင် မည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော သာသနာပြုခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာပါစေဟု ဆန္ဒပြုလျက် ဂုဏ်ပြုရေးသားပူဇော်လိုက်ပါ၏။